Vangani vanhu vafa kubva kumaStalinist repressions? vangani vana vavana vaGeorgian baba vevanhu vechiSlavic ... Munhu wese akafa. Uye avo vari pano ndePokémon yeMars yakavambwa naStalin. Nechinangwa usaverenge ...
Nei Saltyk Shchedrin akati: Kana munhu akatanga kutaura nezvekuda kwenyika, anobva ada kuba? Patriot imbeu iri mumawoko embavha.A Smart anga ari mukuru uyu. Rini uye ndepapi bureaucrat anga asina chokwadi ...
Zvinorevei- yakaoma mbichana? murombo fox haana kungomuuraya chete, akakwenenzverwa, akazadzwa nemarara, uye zvino vanomuseka pamwe nenyika yose Havazive uye havafariri vhiki ...
Nei Putin ashanduka zvakadaro kunze? zera uye unotarisa mifananidzo yako .... erysipelas yakave yakafara kubva kune hutano hwakanaka, asi huma mbichana iri diki. Zvakanaka, pane chimwe chinhu muRussia chiri kuchinja! Hapana brainer ...
Alaska. Iye waani? RUSSIA America. Nhoroondo inofanirwa kudzidziswa. Mapoka emadzinza eSiberia akayambuka isthmus (ikozvino Bering Strait) 1610 zviuru zvemakore apfuura. MaEskim akatanga kugara pamhenderekedzo yeArctic, iyo maAleuts ...
Territorially state system. Ko nezve izvi zvinogona kunyorwa semhinduro kumubvunzo? Ini ndinofunga ndinoda kutaura nezvemhando dzakasiyana dzehurumende. Kune matatu marudzi ehurumende: federal, ...
Ko ruble inochengetedzwa sei? Ino dhiri inochengetedzwa sei? Kutenda kwevanhu :). Kuti aya mapepa akakosha chimwe chinhu. Uye hapana chimwe chinhu. MuFort Knox, matura makuru endarama, yakawanda sei yavanofukidza ...
Ndiani anonyanyisa? Kunyanyisa chii? Nei kunyanyisa kuchizivikanwa nehugandanga? Ini ndichipindura zvichiteerana. Ndiani anonyanyisa? Anonyanyisa mucherechedzo wezvibodzwa zvakadzama uye zviito mune zvematongerwo enyika kana hupenyu hweruzhinji, sekunge ...
Kurumidza kuda Confederate nyika, mienzaniso 10pcs, batsirai ndapota. Switzerland chete uye izvo nomazita. germanium, france, italy, switzerland, spain, russia, china, india, canada, usa Mubatanidzwa panguva ino ndiyo Union State ...
Ndeipi chikonzero chekupokana pakati peIsrael nePalestine? Mwari chete ndiye anoziva)) Kupokana kweIsrael-Palestine kune nhoroondo refu, yakagadziriswa munguva dzebhaibheri. Nzvimbo inowanikwa Israel yanhasi ...
ungaita sei zita vanhu vanoteerera kune rwiyo "Unbekannter soldat" na "Sleipnir"?
ungaita sei zita vanhu vanoteerera kune rwiyo "Unbekannter soldat" na "Sleipnir"? Ehe, izvi zvinoshanda zvakanyanya kumauto edu. Rwiyo rwemusoja sezvazviri muzita, nezve wemusoja wemunhu kana ...
General Ermolov ndiani? Wakaitei, chii chinozivikanwa? Pane rumwe ruzivo! Akarwa muCaucasus ... nenzira, akabudirira ... akabatsira Shamil ... iro gamba reRussia ... ipapo ivo vakamupa iye Russian. ane Chechens ... Ehe, ini ndinorangarira gore rega rega mu ...
Sei vakauraya Saddam Hussein? Kusava pfambi yechiPindos. Kwekudaira kuuraiwa kwevagari vega. Kuti uite hurongwa hwekupusha magasi ehondo yevagari vemuIraq, ayo akabatanidza akati wandei ...
zvinyoro, maUkraine ... uye ndivanaani "Svidomo" uye izvo zvavakakudza ?? izwi iri rinoshandurwa sei ???
zvinyoro, maUkraine ... uye ndivanaani "Svidomo" uye izvo zvavakakudza ?? izwi iri rinoshandurwa sei ??? Nhasi, izwi iri riine zvimwe zvarinoreva ... Saka chii chinoreva pfungwa ye "Svidomo" panguva yacho? Svdomiy ...
ndechipi musiyano uripo pakati llama uye alpaca? Lama yakasimudzwa kwemazana emakore muSouth America sechipaka mhuka, uye alpaca nekuda kwehunokosha hunhu hwayo. La # 769; ma (Lama glama) South American mamalia ...
Ndiani uye sei hurumende yeRussia inoumbwa? Isu tiri Sachigaro weHurumende yeRussian Federation inosarudzwa neMutungamiriri weRussian Federation nenzira yakatarwa nebumbiro reRussia Federation. Mutevedzeri weMakurukota eRussian Federation pamwe nemakurukota ehurumende vanogadzwa ...
Republic of Tatarstan - ndizvo Russia here?
Republic of Tatarstan - ndizvo Russia here? Imwe yedunhu reRussia, inongodaidzwa kuti republic yemakori Hongu, chigutsa chiri pachena .. FEDERAL STATE (kubva lat. "Federatio" mubatanidzwa) mubatanidzwa weviri kana kupfuura nyika-nyika (kana yenyika) ...
Ndiani anodakarira, kuti angaziva sei kana munhu anoodza achirumbidzwa? kana iwe wakatiza kubva kuuniti - uri deserter uye zvinorumbidzwa! =) uye kana achibva kunhandare yehondo akasiya shamwari dzake ...
Iyo bhajeti yenyika
Bhajeti renyika - iri bhajeti renyika - hukama hwehupfumi pakati penyika uye zviga zvemarudzi ese emuridzi uye vagari vega nezvekuumbwa kwehomwe yakakosha yemari yakapihwa kuzadzisa ...
Mumamiriro ezvinhu api akabuda iyo Poland uye iyo kuumbwa kweRussia Humambo? Muvakidzani wangu mukoridho Kunopera nekusingaperi kukakavara Zvandichaunza pamusoro pako mose. Patakatora Warsaw kwauri, saka mum diap ...
Mibvunzo ye80 mu database yakagadzirwa mu 0,846 masekondi.